Kedu ka ọrụ tupu ọrụ amalite?
Mmekọrịta - contractions nke akpanwa, dị mkpa maka ọmụmụ nwa ebu n'afọ. Ịmata ọdịiche dị n'etiti ọgụ ezi na ọgụ ụgha, ụgha na-apụta site na izu iri abụọ ma nwekwuo izu 2-3 tupu ịpụta (Braxton-Hicks contractions).
Mmetụta n'oge ọrụ tupu ọmụmụ
Mgbaàmà nke ọgụ ndị a tupu a mụọ nwa na-egosipụta site na nrụgide na nhụjuanya nke na-egbu mgbu n'ime akpanwa, nke na-agabiga ngwa ngwa ma ghara iduga na mmalite nke cervix . Ma nrụgide tupu ọmụmụ nwa na ịmụ nwa yiri nke ahụ, ihe ịrịba ama nke ịmalite ime nwa - ịkasi ike na ọnyá na ala nke afọ, na oge nke ịlụ ọgụ tupu amụọ ya pụrụ ịdị iche, ha na-apụ n'anya ma ọ bụ pụta. Mkparịta ụka dị iche iche na-adịgide adịgide na nkeji oge 15 nkeji ma ọ bụ obere.
Kedu ka mgbochi ndị a na-eme tupu e nyefee gị?
Nkọwa nke ọrụ tupu ọmụmụ nwa nwanyị ọ bụla dị iche: nhụjuanya na-egbu mgbu n'ime afọ ala, ihe mgbu na pelvis, na azụ ala, ike ahụ nwere ike ịdị iche - site na obere mmetụta mgbu, dịka kwa ọnwa, na akwa mgbu dị n'ime ala. Ihe dị iche iche nke ịlụ ọgụ ụgha na ịlụ ọgụ tupu a mụọ ha bụ oge ha na oge ha. Mmekọrịta tupu ọmụmụ nwa nwere ike ịdịgide ruo 5-10 sekọnd na nkeji, oge nke oge na-eji nwayọọ nwayọọ belata: na mbido oge ihe karịrị nkeji iri 15, mgbe a na-emeghe cervix, ọ na-ewepu oge ruo minit 1-2. Ọ bụrụ na oge ọrụ tupu ọmụmụ nwa na oge dị n'etiti ha bụ otu ihe ahụ ma ọ bụ nkeji - ọnyá kwesịrị imeghe ma nwa ahụ ga-apụta.
Amalite mmalite - mgbaàmà
Ịmalite ọrụ abụghị nanị ịlụ ọgụ. Nke mbụ, enwere ike ịgbu mgbu ma ọ bụ n'ime eriri afọ, yiri nsị. Mgbe ahụ, e nwere mmegharị oge na-adịghị mgbu na nke na-egbu mgbu nke akpanwa ahụ, nke na-emebeghị ka ọ bụrụ n'olu ya, mana nkwụnye mucous si na ya pụta. Ọ bụ mmiri na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha ọcha, ma ọ bụghị ihe nfe mmiri, nke nwere ike igosi ụzọ a ga-esi enweta mmiri nke mmiri mmiri. Ọ bụrụ na nnyefe ahụ dị nro, aja aja ma ọ bụ na-ejikọta ọbara, ị kwesịrị ịga ozugbo n'ụlọ ọgwụ.
Kedu otu esi achọpụta mgbochi tupu i nyefee gị?
Iji mara ọdịiche dị n'ezi ọgụ sitere n'aka ndị ụgha, ọ dị mkpa ịghọta otú agha ahụ si eme tupu ha amụọ. Tupu ikpughe zuru oke nke cervix na - nkezi na-ewe ruo awa 12. Mkpịsị ụkwụ kwesịrị imeghe ruo 10 cm, ma nke a apụghị ime ozugbo. Ngosipụta na-adịghị ngwa ngwa wee malite site na mkparịta ụka mgbe nile, nke na-adịru ruo oge ole na ole, adịghị enwe mwute ma na-emeghachi kwa minit 20.
Nwanyi kwesiri ichota oge n'agbata agha, ma nke kacha mma n'igoro ya, ka o mata ugboro ole ogugu agha di tupu amua. Ka a na-emeghe cervix, etiti ha dị mkpụmkpụ, ọgụ ahụ na-adịte aka. Ọ bụrụ na nkeji n'etiti ime mkparịta ụka dị ihe dị ka nkeji 2 ma dịgide na nkeji - a na-emeghe olu, a ga-amụ nwa ahụ n'ime ọkara elekere, ma n'oge a, ọ dị mkpa ịnwa n'ụlọ ọgwụ. Na nke mere na ọ bụghị ihe ijuanya na nnyefe ahụ, ọ dị mkpa ịtụle oge n'etiti esemokwu na oge ha.
Àgwà nke nwanyị n'oge ọrụ
Nke mbụ, mgbe ị na-amalite mgbe niile, ị ga-aga ụlọ ọgwụ. Mgbe a nabatara ya, dọkịta ahụ ga - enyocha nwanyị ahụ, chọpụta otú ọnyá ahụ si meghee, ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nye iwu ka ị gbakwunyekwuo ọmụmụ iji chọpụta ụzọ ị ga - esi mụọ nwa. N'oge agha ahụ, nwanyị ahụ kwesịrị ịdị jụụ ma were ọnọdụ kachasị mma maka onwe ya. Ruo mgbe mmeghe nke cervix enweghị ike ịkwanye, ya mere, ị nwere ike ime ihe ga-enyere aka dọpụ uche. Dịka ọmụmaatụ, jiri nwayọọ nwayọọ na-eku ume ma gụọ minit ole na ole n'etiti ọgụ na oge ma gbanwee ume ahụ n'oge agha n'onwe ya.
Ighachi ịhịa aka n'ahụ na mpaghara sacrum ma ọ bụ nkedo nke afọ na-enye aka iji zuru ike, ma ị gaghị asa ahụ ma ọ bụ ịsa ahụ ọkụ. Ọ dị mkpa iji mara oge a ga - eme ka mmiri nke mmiri na - agbapụta - site na oge a ka a ga - amụ nwa ahụ n'ime awa iri abụọ na anọ, ebe ọ bụ na oge na - adịghị agwụ agwụ na - eduga ọrịa na nsogbu maka ma nne ma nwa ahụ.
Akwara mgbe amuchara nwa
Episiotomy - ọgwụgwọ
Mgbe a mụsịrị nwa, coccyx na-ewute ya
Ntughari mgbe amuchara nwa
Mweghachi nke mgbanwe mgbe amuchara nwa
Ọrịa afọ mgbe ọ na-amụ nwa
Ịmụ nwa n'ime mmiri - ikpebi ma ọ bụ na ọ bụghị?
Mmiri mmiri na-amụ nwa - ihe mere
Mmiri agaala, ma ọ dịghị ọgụ
Mmiri na-emegide anwụ
Ọbara - uru bara uru
Fricassee nke ọkụkọ na mushrooms
Uwe akwa mama
Ihe ngosi nka nke Geneva na History
Kutaby na elu na cheese - uzommeputa
Duchess nke Cambridge Keith ọzọ n'ọkwá?
Kedu otu esi enweta ego n'aka ụmụ klas?
Kim Kardashian gara ballet: a na-eji sweatta si "ọkọlọtọ nke USSR" na ịnyịnya ígwè
Mma ụlọ na kichin
Inye aka aka
Jessica Chestane katọrọ Ememe Nkiri Cannes maka ajọ mbunobi megide ụmụ nwanyị
Kedu ka esi ghọta na nke a bụ ịhụnanya?
5 ihe oyiyi kwa ụbọchị - otu esi di iche kwa ubochi?
Natalia Vodianova metụrụ ya aka n'obi Antoine Arnaud na Ụbọchị Valentine
Enwere ike ime ime na ule na-ezighi ezi?
Warmed roba akpụkpọ ụkwụ
Kedu otu esi emeghe oghere?
Kpuo ụra maka aka gị